Ambohijatovo, 12 Desambra 2015, taminy 8 ora. Ireo no tena fahavalom-pirenena - Tout pour la restitution des îles malagasy
TERRORISME D'ETAT - Malagasy mampiady Malagasy toa azy ihany!
Mampalehelo, mampahonena fa vao maraina ry zalahy tokony hitandro ny filaminana sy handamina dia tonga nanemitra no fidirana ny zaridainan'Ambohijatovo. F'iza marina ny fahavalo hiadivan'ireto? Mba fantatr'izireo ve ny tanjon'ilay tolona tsy misy idiran'ny politika politisianina?
Marihina kosa aloha fa raha tao ny Zandary (maro an'isa) sy ny polisim-pirenena, tsy nisy kosa ny avy amin'ny Tafika malagasy. Na izany aza dia mahamenatra imason'ny vahiny iizao tranga izao satria dia Malagasy samy Malagasy no ampiadivana, kanefa Tanindrazana iray ihany no niaviana sy ho levenana.
Soa fa teo amin'ny 800 teo ny Tia Tanindrazana tonga avy eo. Tsy omena tsiny ny ankamaroan'ny olona satria mampatahotra tokoa ny fijery ireto herim-pamoretanana nalefan'ny fitondrana Hery Rajaonarimampianina ireto. Rahoviana ihany ireo be basy sy be baoty no ho tonga saina fa niala avy tamin'ny vahoaka anie ry zalahy e! Ary karazana taolana no omen'ireo mpitondra ireo ho azy raha ampitahiana amin'ny saosy be vaodikodina any ho any...